Muuqaalka muuqaalka iyo qaybta la gooyey ee AutoCAD 2013 - Geofumadas
Luulyo, 2012 AutoCAD-AutoDesk
Waxaa ka mid ah isbedel ugu weyn ee qoraalkii ugu dambeeyey ee AutoCAD waa nadaam 3D shaqeeya. Forums la category AutoCAD 3D codsaday in muuqaalada qaar ka mid ah abuura qaadan doonaa version aasaasiga ah iyo suurto gal adeeca this isbedel AutoDesk codsatay ka versions 2010, inkastoo in horumarka waa mid gaabis ah in qaar ka mid ah qaab waafaqsan.
Si kastaba ha ahaatee tani waa aasaas u ah barnaamijyada kale ee tartanka, kuwa kuwan oo ku sameeya AutoCAD ee qaabka, waxay u taagan tahay horumar hor leh, wax badan oo dheeraad ah haddii aan ka bartay warqad.
aynu aragno tusaalahan soo socda iyadoo la adeegsanayo AutoCAD 2013 mid ka mid ah shaqooyinka macallinka Astete López.
1 Dhiso qalabka 3D ee shaxda 2D.
Waxaan sawirkan ku sameynay cabbirka 2 ee Modelka. Si aad u aragto habka isometric waxaan u tagaynaa Viewcube waxaanna dooran karnaa aragtida Isometric-koonfur-bari.
Kadib si loo abuuro shay 3D waxaan isticmaalnaa taliska PRESSPULL
Waxaa xiiso leh in amarkani uu la shaqeeyo shay, sida haddii aan u leenahay in loo rogo polyline ama sidoo kale aag xuduud ah. Iyada oo xulashadan ugu dambeysa waxaad kaliya gujisaa gudaha aagga ka dibna na weydiiso in aan galno cabbirka ka baxsan. Waxaan sidoo kale u sameyn karnaa si tartiib ah iyada oo aan tilmaameyn cabbir gaar ah laakiin dhaqdhaqaaqa jiirka.
2 Samee aragtiyo ku saabsan qaabka 3D
Waayo, kanu, dooro tab Layout ah, ka dibna waxay muujinayaan in soo jeedinta cusub oo loo abuuray inay ka shayga (Waxyaabaha), laakiin sidoo kale dooran kartaa meesha lagu shaqeeysto ah (model Dhan). Waxaad dhawrtaa hufnaan sabayn line amarka shaashadda, sida uu u hirgeliyey in AutoCAD 2012 iyo 2013. Waayo, kuwa caadaysteen in ay goortay arkayaan hoose this ee shaashadda, nabdoon tahay wax aad looga xumaado, laakiin jiilka cusub horay u barteen, Dhanka kale, ilaa hadda waxaa suurtogal arag AutoCAD 2013 sida AutoCAD 2008 inkasta oo si dhakhso ah ama ka dib aysan u sii noqon doonin.
Marka shayga la xushay, waxay ku waydiisaneysaa magaca Layoutka haddii ay tahay mid cusub, ama mid hadda jirta si uu u isticmaalo (loo sameeyo).
Marka la doorto nidaamka, waxay na weydiisaneysaa in ay naga siiso sheyga gacanta. Fiiri in Ribbon sare uu ka tarjumayo amarrada ku habboon, sida xulashada Model Space, wacyigelinta, aragtida sheyga iyo miisaanka. Xaaladdan waxaan ku heynaa xaruntan si aad u sareysa.
Ka dibna si aad u aragto fikradaha kale waxaan dooraneynaa ikhtiyaarka Orientation, waxaanan ku dhejin karnaa sida lagu muujiyay sawirka.
3 Abuuri faahfaahin qaybaha qaybta shayga 3D
Aragtiyada la qiyaasey waxay la timid AutoCAD 2012 laakiin horeyba waa cutubka iyo qaybta faahfaahsan waxay qayb ka ahayd Maxaa Cusub ee AutoCAD 2013. Abuur View ka fursadaha waxaad dooran kartaa cut dhamaystiran (Full) in uu noqon karaa mid toosan ama dadban, sidoo kale safan via dhiiran ama line in cut a barbar weheliyaan line a dhigaya nasashada.
Ka dib marka la doorto sheyga oo tilmaamaya khadka la jaray, waxa kaliya oo ay tahay in la helo halka laga dhigayo.
Iyada oo ikhtiyaar ikhtiyaari ah waxaad tilmaami kartaa haddii aan rabno shayga lakulmay, oo leh qadado qarsoon, ama mesh muuqda.
Download AutoCAD 2013, ardayda
Post Previous«Previous Sanadka ugu weyn ee Google Chrome
Post Next Laga soo bilaabo i3Geo iyo 57 qalabka Software-ka ee BrazilNext »
3 Jawaab ah "Muuqaal sawir leh iyo qayb jarida oo leh AutoCAD 2013"
Fikradan ayaa ah tan ugufiican, waxa ugu xun ayaa ah inaan waqti u qaatay inaan bedelo nooca, hadana waxaan isku dayaa inaan qabsado _viewbase waxayna igu siineysaa farriinta soo socota ee ah 'Inventor server way ku guuldaraysatay inay soo degto' sidaa darteed aniga waxba igama tarin, haddii qof yaqaan sida loo xaliyo tan Dhibaatada
Thanks for info. Waxay ahayd mid aad ufiican
Si kastaba ha ahaatee waxaan qabaa dhibaato. Waxaan u baahanahay inaan arko cabbirrada aragtiyo dhowr ah, laakiin ma muuqdaan (ma aha habka aad sharaxday)
Waxaan runtii ku farxi lahaa haddii aad i siisid wax yar
Agapito Perez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u maleynayaa in autocad uu yahay mid aad u wanaagsan